ကွင်းဆက်တုံ့ပြန်မှု | portal │ပညာရှင် Hans Kottke
ပြီးခဲ့သည့်ဧပြီလ 11, 2011 | မိမိအ Kottke | Tags:: 2011, AKW, Atomernergie, ဂျပန်နိုင်ငံသည်, အရည်ပျော်ကျခြင်း, ကွင်းဆက်တုံ့ပြန်မှု, ကျန်နေတဲ့အန္တရာယ်, ပတ်ဝန်းကျင်.
categories: 2011, ယခု, ယေဘုယျ, နောက်ခံ, ဆေးဝါး | comments: အထူးပြောစရာမရှိ
Atomzeichen – နေရာတိုင်း…
နှင့်, auch hier im Braunschweiger Land
podcast: အသစ်င်းဒိုးထဲမှာ Play | ဒေါင်းလုပ် (1.8MB) | embed
December 22nd, 2010 | မိမိအ Kottke | Tags:: 2010, Asse, Atomzeichen, Braunschweig, Gorsleben, ကွင်းဆက်တုံ့ပြန်မှု, Konrad, Morsleben, ခရစ္စမတ်, အနာဂတ်.
categories: 2010, ယေဘုယျ, Braunschweig, နောက်ခံ | comments: အထူးပြောစရာမရှိ
(လူ့)နျူကလီးယားဆန့်ကျင်ကွင်းဆက်တုံ့ပြန်မှု – အကြှနျုပျ၏ဘူတာရုံ Brokdorf…
အခုနောက်ဆုံးငါစီမံခန့်ခွဲခဲ့ကြ – အထဲကလှုပ်ရှားမှုကွင်းဆက်တုံ့ပြန်မှုအကြောင်းကိုငါ့အနညျးငယျကိုဗီဒီယို 24. ဧပြီလ 2010 finish ကိုမှ.
ဒါဟာနေသာစနေနေ့ခဲ့သည်, ကျနော်တို့နံနက်မှာရောက်လာတဲ့အခါ 9.00 Braunschweig ကနေသဘာဝကို Power Express ကိုအထူးရထားနှင့်အတူထွက်သွားကြညနေ. ထိုအခန်း၌လေထုကြီး! လူငယ်ကနေအဟောင်းမှအရာအားလုံးကိုကိုယ်စားပြုခဲ့သည်. ဖတ် (အ TAZ – အကြှနျုပျ၏ပုံမှန်သတင်းစာ) ကျောက်ပြားပေါ်မှာ တင်. ကအသားညှပ်ပေါင်ကိုသိမ်းပိုက်ခဲ့သည်, အထမင်းစားခန်းကားထဲတွင်ကော်ဖီနှင့်ဂီတ, ဘယ်မှာလူတိုင်း, အလို, တစ်ဦးခြေထောက်ခါနိုင်.
Itzehoe ခုနှစ်တွင်ကျနော်တို့ရောက်ရှိ 13.00 စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် Brokdorf ဖို့အပေါ်မောင်းထုတ်ရန်စောင့်ဆိုင်းနေဘတ်စ်ကားသို့သွားလေ၏မှ. ဆိုက်ရောက်အပေါ်သို့ကျနော်တို့ဆန့်ကျင်နျူကလီးယားနဖူးစည်းစာတမ်းတွေ Suns နှင့်အတူလူအတော်များများတွေ့ဆုံခဲ့, အသေားကို၎င်းတို့၏လမ်းကိုဖန်ဆင်းအားလုံးသော. သိုးသေားများ၏ရှေ့မှောက်၌စားကျက်များနှင့်လူမျိုး၏လိုင်းအသေားကိုမောက်အပေါ်မှာစုဝေး. နောက်ကွယ်မှာတူညီခဲ့သည်, ရောင်ပြန်ဟပ်နေတဲ့တထောင်ပြောင်သောအရောင်အဆင်းအတွက်နေပူထဲမှာ. နောက်ခံ၌သငျနျူကလီးယားဓာတ်အားပေးစက်ရုံကိုတွေ့မြင်နိုင် Brokdorf, များစွာသောအရောင်စုံလူများနှင့်ရှေ့တော်၌ထိုထင်ရသောအဆုံးမဲ့ကွင်းဆက်.
အဖြေ 14.30 ဝန်ကြီးချုပ်ထို့နောက်ကွင်းဆက်ပိတ်ပွဲကိုယူ. ကျနော်တို့ကိုငါတို့လက်အကျဉ်းချုပ်နှင့်ကြိုးသို့မဟုတ် Jumper တွေနဲ့သေးငယ်တဲ့ကွာဟချက်အောင်မြင်.
ကျနော်တို့ကလုပ်သော – ကွင်းဆက်ခဲ့သည်! 120 NPP Brokdorf မှနျူကလီးယားဓာတ်အားပေးစက်ရုံKrümmelမှကီလိုမီတာ… ဒါဟာအလွန်ကြီးစွာသောခံစားချက်ခဲ့သည်!
action ကိုနောကျ, ငါနောက်လာမည့်နျူကလီးယားဓာတ်အားပေးစက်ရုံ Brokdorf မှဆန္ဒပြခြင်းငှါသွားလေ၏. Braunschweig မှတစ်ဦးကတီးဝိုင်း anti-နျူကလီးယားလှုပ်ရှားမှု၏သမိုင်းကြောင်းတွင်အကြီးမားဆုံးအောင်မြင်မှုကစားခုန်များနှင့်ကျင်းပ. ငါတို့သည်လည်းပိုပြီးအတူကြားဖြတ်အစိုးရသိုလှောင်မှုကိုစက်ရုံအတွက်အခြားလုပ်ရပ်ကနေလေ့လာသင်ယူ 8000 လူများနှင့် Biblis နှင့်အတူ 20.000 DemonstrantInnen. အတူတူ Added, ဒီစနေနေ့ဒါကြောင့်တုန်လှုပ်စေသောခဲ့ကြ 148.000 ခြေထောက်နျူကလီးယားစွမ်းအင်ဆန့်ကျင်ပြည်သူ့!!!
ညဦးယံအချိန်အဲ့ဒီနောက်သိပ်မကြာခင်မှာပဲ 22.00 ကျွန်တော်တို့ Braunschweig အတွက်လုံခြုံစိတ်ချစွာအားလုံးပြန်ခဲ့ကြ AM – အတန်ငယ်မောပန်းပေမယ့်အောင်မြင်တဲ့အရေးယူမှုနှင့် ပတ်သက်. မင်္ဂလာရှိ၏. ဤသည်နေ့ရက်သည်ကရကျိုးနပ်ခဲ့တဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသတင်းစကားပေးပို့!
မေလ 4, 2010 | မိမိအ Kottke | Tags:: 120 ကီလိုမီတာ, Braunschweig, ကွင်းဆက်တုံ့ပြန်မှု, တည်နေရာ Brokdorf.
categories: 2010, ယခု, ယေဘုယျ, Braunschweig, နောက်ခံ | comments: အထူးပြောစရာမရှိ
ဧပြီလ 24 ရက်နေ့တွင်ကွင်းဆက်တုံ့ပြန်မှု 2010: ကျနော်တို့ကအလောင်းအစားအနိုင်ရရှိခဲ့ပါပြီ…
မှာနံနက် 9.00 ဒါကြောင့် Braunschweig မှအထူးရထားထဲမှာပယ်သွားလေ၏ Watch. သေးငယ်တဲ့ကျောပိုးအိတ်နှင့်အတူ, တပ်ဆင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုကင်မရာနှင့်ငါအများကြီးတူသောစိတ်မှရထားပေါ်တွင်တွေ့ဆုံခဲ့ကင်မရာ. အားလုံး Einte uns Das ဆောင်ပုဒ်:
အဆိုပါ ပြည်သူ့ကွင်းဆက်တုံ့ပြန်မှု နျူကလီးယားဓာတ်အားပေးစက်ရုံ၏ decommissioning Brunsbüttelဘို့စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးအတွက်တစ်ဦးပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းဖြစ်သင့်, Krummel, Biblis နှင့် Neckarwestheim ဖြစ်. အကွာအဝေးကျော် 120 နျူကလီးယားဓာတ်အားပေးစက်ရုံKrümmelမှBrunsbüttelစက်ရုံမှကီလိုမီတာနျူကလီးယားဓာတ်အားပေးစက်ရုံဆန့်ကျင်တဲ့လူ့အကွင်းဆက်ဖွဲ့စည်းသင့်တယ်. တစ်ဦးအတွက် ယခင်ဆောင်းပါး ငါအလောင်းအစားခဲ့, ကျွန်တော်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ကြောင်း… ထိုအခါရလဒ်လွှမ်းမိုးသောခဲ့သည်!!!
ဒါဟာခဲ့ Anti-နျူကလီးယားလှုပ်ရှားမှုများ၏သမိုင်းတွင်အကြီးဆုံးဆန္ဒပြပွဲ! 120.000 ပြည်သူ့ Schleswig-Holstein နှင့်ဟမ်းဘတ်အတွက် "ခရီးဝေးသရုပ်ပြ" တွင်ပါဝင်! တစ်ချိန်တည်းမှာ NPP Biblis ၏ခဲ့သည် 20.000 နျူကလီးယားစွမ်းအင်နှင့် Gegenern ဝိုင်းရံ 7.000 နျူကလီးယားစွန့်ပစ်ကြားဖြတ်အစိုးရသိုလှောင်မှုကိုစက်ရုံအပေါ်ဗဟိုပြုသရုပ်ပြ. ငါမှန်မှန်ကန်ကန်ရေတွက်ခဲ့လျှင်, ထို့နောက်ပြီးခဲ့သည့်စနေနေ့ခဲ့ကြ 147.000 ပေးရနျူကလီးယားစွမ်းအင်ဆန့်ကျင်!!!
ဤတွင်တိုတောင်းတဲ့ရုပ်ရှင်ဖြစ်ပါတယ် – အထက်မှအောက်ထဲကနေ:
နှစ်ပတ်အတွင်းခုနှစ်, မြောက်ကိုရီးယားရိုင်း-Westphalia အတွက်ပြည်နယ်ရွေးကောက်ပွဲရာအရပျယူလိမျ့မညျ (9.ပိုများသော). အခုက, ဖိအား, နိုင်ငံရေးသမားများအပေါ်ဤကွီးစှာအရေးယူစေသည်, ထိန်းသိမ်းရန်နှင့်ဖက်ဒရယ်နှင့်ပြည်နယ်များ၏စွမ်းအင်သစ်အယူအဆတောင်းဆို: နျူကလီးယားဓာတ်ပေါင်းဖိုပယ်နှင့်စွမ်းအင်၏အခြားပုံစံကိုပြောင်းလဲဖို့!
ဤတွင် ausgestrahlt.de ၏ link တစ်ခုအား: သင်ပြုနိုင်သည်ကို…
ကွင်းဆက်တုံ့ပြန်မှုမှငါ့ကိုယ်ပိုင်ဗီဒီယိုကဒီမှာ: လူ့ကွင်းဆက် – တည်နေရာ Brokdorf
အဘယ်သူခဲ့ပြီးပို? – Anti-နျူကလီးယားကွင်းဆက်၏ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်သဘာဝထိန်းသိမ်းရေးဂျာမဏီများအတွက်အဖွဲ့ချုပ်များမှာ (Bundeli), Anti-နျူကလီးယားအဖှဲ့အစညျး .ausgestrahlt, စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးကွန်ယက်ကို Campact နှင့် Arbeitsgemeinschaft Schacht Konrad. action ကို Attac ဂျာမဏီအားဖြင့်လည်းထောက်ခံသည်, ဂျာမန် Renewable Energy အဖွဲ့ချုပ် e.V., မဟာမိတျအဖှဲ့ 90 /အဆိုပါဂရင်း, DGB မြောက်, ဂျာမန် Naturschutzring – DNR, ရာသီဥတုမဟာမိတ်အဖွဲ့, ဂျာမန်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအကူအညီ – DUH, လက်ဝဲ, ဒေါက်တာ. သောမတ်စ် Schaack – ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးမှူး Nordelbische ဘုရားကျောင်း, ဧဝံဂေလိလူငယ်ဟမ်းဘတ်, ကြားဖြတ်အစိုးရသိုလှောင်မှုကိုဆန့်ကျင်ပြီးတာဝန်သိတဲ့စွမ်းအင်မူဝါဒမှာအတူတကွဖိုရမ် (Gundremmingen), အစိမ်းရောင်လူငယ်, IG သတ္တုကမ်းခြေ, IG သတ္တုအောက်ပိုင်း Saxony နှင့် Saxony-Anhalt, IG သတ္တု Unterelbe, နျူကလီးယားစစ်ပွဲများ၏ကာကွယ်တားဆီးရေးအဘို့အအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသမားတော်များ – IPPNW, အ SPD အတွက် Young ကဆိုရှယ်လစ် – Young ကဆိုရှယ်လစ်, သဘာဝတရားကဂျာမဏီ၏သူငယ်ချင်းများ, ဂျာမဏီ၏လူမှုဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ – SPD.
ပြီးခဲ့သည့်ဧပြီလ 25 ရက်, 2010 | မိမိအ Kottke | Tags:: 24.ဧပြီလ 2010, ညှိနေဖို့!, anti-နျူကလီးယားလှုပ်ရှားမှု, ကွင်းဆက်တုံ့ပြန်မှု.
categories: 2010, ယခု, ယေဘုယျ | comments: အထူးပြောစရာမရှိ
လောင်းကစား – ကျနော်တို့ကဧပြီလ 24 ရက်နေ့တွင်ကွင်းဆက်တုံ့ပြန်မှုဖန်တီး…
နံနက် 24.April 2010 တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် 120 အBrunsbüttelစက်ရုံထဲကနေ AKW Krümmelသည်အထိနျူကလီးယားဓာတ်အားပေးစက်ရုံဆန့်ကျင်သည့်အထင်ကြီးစရာအမှတ်အသားအဖြစ်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာရှည်လူ့ကွင်းဆက်ကီလိုမီတာဖြစ်- ဆောင်ပုဒ်: “နျူကလီးယားစွမ်းအင်စက်ရုံများ off”. နှင့်မြောက်ရိုင်း-Westphalia နှစ်ခုကာလ၌ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ဒီနှစ်ပတ်အတွင်းမှာချာနိုဘိုင်းဘေးအန္တရာယ်၏နှစ်ပတ်လည်နေ့မပြုမီ!
လူ့ကွင်းဆက်မှဖြစ်ပါသည် 14.30 အဘို့စောင့်ကြည့် 30 တစ်မိနစ်နှင့်လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုရောင်စုံအစီအစဉ် concomitantly ထွက်သယ်ဆောင်ခံရဖို့.
အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုသင်အပေါ်နိုင် Join-မူလစာမျက်နှာ ausgestrahlt.de ၏ ရယူ.
ဤသည်ကိုဖော်ပြထားတယ်, သင် action ကိုအထူးရထားရှိရနိုင်နှင့်သင်မည်သို့ကိုယ်ကိုကိုယ် action ကိုနိုင် advertising ဘူးအဖြစ်: လက်ကမ်းစာစောင်များ, ပိုစတာများ, လမ်းဘေးကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်, ကွင်းဆက်မေးလ်, Kinospots, Lokalpresse, ဘတ်စ်ကားစည်းရုံး…
လမ်းကြောင်းကဏ္ဍများအပေါ်များသော၏လမ်းကြောင်းများနှင့်အချိန်ကိုက်နှင့်တာဝန်ကိုနိုင်သငျသညျ ဒီမှာ မြင်!
ပင်ကွင်းဆက်, ရာနှင့် ပတ်သက်. ငါးမီတာအကွာအဝေးမှာလူဖြစ်ကြ၏, တစ်ဦးရဲ့အောင်မြင်မှုသည်. သို့သော်မယ်လို့ 24.000 လိုအပျတဲ့လူ. ဒါပေမယ့်သင်တန်း၏, ကွင်းဆက်လည်းအနီးကပ်ကို set up နိုင်ပါတယ်. ထိုအခါ action ကိုတကယ်ကြီးမားသောဖြစ်ပါသည်.
တိုင်းမီတာအရေအတွက်! လူတိုင်းအရေအတွက်! အzählst! ဤအများအတွက် .ausgestrahlt ရုပ်ရှင်ရုံအစက်အပြောက်မှာဖြစ်ပါတယ် 120 ကီလိုမီတာလှုပ်ရှားမှု- နှင့်လူ့ကွင်းဆက်အပေါ် 24. ဧပြီလ. အဖြစ်. 50 စက္ကန့်, တော်တော်များများတစ်ဒါဇင်၏တက်ကြွစွာပံ့ပိုးမှုဖြင့်တစ်ဦးမြူးနစ်ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးဒါရိုက်တာနှင့်ထုတ်လုပ် .ausgestrahlt-ပိုင်ဆိုင်မှုများ. ဤတွင်ရုပ်ရှင်ရုံအစက်အပြောက်, အဟုတ်သင်သည်သင်၏အကြိုက်ဆုံးရုပ်ရှင်ကိုပူဇော်နိုင်ပါတယ် – ဆာဗာကနေပြောက်ကို download လုပ်ပါနှင့်ဖြစ်နိုင်သည်. DVD ကိုမှမီးရှို့ခြင်း!(Website တွင်အသေးစိတ်အတွက်)
ငါ၌ Count – သငျတို့သ???
ဧပြီလက 1st, 2010 | မိမိအ Kottke | Tags:: နျူကလီးယားစွမ်းအင်စက်ရုံများ off, ကွင်းဆက်တုံ့ပြန်မှု.
25 အသုံးပြုသူများသည် အွန်လိုင်း
ဆိုက်ကိုမာတိကာ: ©2010 portal │ပညာရှင် Hans Kottke
Mon Jun 17th 2:47:42 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန် 2019